फ्यानको आग्रहमा स्टे’डियममै स्विडेनकी महिला फुटबलरले जर्सी खो’लेपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….. – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/फ्यानको आग्रहमा स्टे’डियममै स्विडेनकी महिला फुटबलरले जर्सी खो’लेपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
फ्यानको आग्रहमा स्टे’डियममै स्विडेनकी महिला फुटबलरले जर्सी खो’लेपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
एजेन्सी, १६ बैशाख । फुटबल एक यस्तो खेल हो जहाँ खेलाडीहरू मात्र होइन प्रशंसकहरू पनि धेरै जो’सिला हुन्छन् । जो’समा आएर कहिलेकाही खेलाडी र प्रशंसकहरूले केहि यस्ता ह’र्कतहरु गर्छन्, जसले गर्दा विश्व नै अ’चम्मित हुन्छ ।
फुटबलको बारेमा कुरा गर्दा प्राय खेलाडीहरू खेल पछि एक अर्कासंग जर्सीहरू परिवर्तन गर्दछन् । यो चलन खासगरी पुरुष फुटबलमा देख्न सकिन्छ तर २०११ मा एक महिला फुटबलरले कुनै खेलाडीसँग नभई स्टेडियममा रहेका एक फ्यानसँग जर्सी साटेकी छिन् ।
स्वीडेनका फुटबलर जोसेफिन एहकिस्टले यो कार्य गरेकी थिईन, उनले जर्मनी बिरु’द्धको खेल पछि एक जर्मन फ्यानलाई आफ्नो टिर्सट खेलेर दिईन । खेल समाप्त भयो र जोसेफिन एहकिस्ट दर्शक स्टन्डमा गईन, जहाँ एक फ्यानले उनको टिर्सट खोलेर एहकिस्टलाई उनको टिर्सट दिन आग्रह गरे ।
एहकिस्ट सुरुमा हिचकिचाए तर त्यसपछि उसले तुरुन्तै आफ्नो टिर्सट खोलिन र जर्मन प्रशंसकको टिर्सट लगाईन । त्यसपछि, प्रशंसकले एहकिस्टको गालामा कि’स गरे । जुन घटनाको भिडियो सोशल मिडियामा भाइरल भएको थियो । भिडियो हेर्नुहोस्ः
गितको पारखी भन्ने टाईटलमा ‘नो टेन्सन’को भाग ९’ सार्वजनिक (भिडियो)